Twilight Imperium: Roll uye Nyora iri kuuya - Game point - Board uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 29, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, Misoro Yakaisvonaka, nhau
Twilight Imperium: Kunyorwa kuchava roll uye kunyora mutambo wakavakirwa pane zvakasikwa zve 4X space board game Twilight Imperium. Izvi zvakaziviswa neFantasy Flight Games murukova rwekuzvarwa kwe25th brand. Mutambo wedhizi unofanirwawo kunge uine 4X zvinhu - ongorora, wedzera, shandisa uye kutsakatisa.
Fantasy Flight Games yaive nechishamiso chakachengeterwa zuva rekuzvarwa kwebhodhi mutambo Twilight Imperium. Iwo mutambo wechadenga uchawedzerwa kuti ubatanidze roll uye kunyora mutambo - uye saka unofanirwa kuvhurika otomatiki kune vatambi vanofarira matepi eTwilight: Imperium, asi anogara achinetsekana nehurefu hwebhodhi mutambo wemitambo.
Twilight Imperium: Kunyorwa kuchave "epic".
Nekudaro, Twilight Imperium: Kunyorwa hakuratidzike kunge kuri nyore, kanenge "epic" uye yakakura roll uye kunyora mutambo zvachose. Ndizvo zvakavimbiswa nemunyori wezita racho, James Kniffen. Akambenge agadzira mitambo yakaita seBudiriro: A New Dawn kana News Angeles uye aibatanidzwa muStar Wars: Armada. Kniffen saka anojairana nemusoro wenzvimbo - yakanaka prerequisites yekukwanisa kuita mutambo wedhiza remuchadenga nenzira yemhepo.
Sei waifanira kugadzira dhayisi rakadaro reTwilight Imperium? Mhinduro iri nyore pane zvaitarisirwa: Pakanga pasati pambove nemusoro mutsva muTwilight universe kwemakore akawanda uye vanoda "Roll and Writes" zvakadaro. Nekudaro, mafani eTwilight Imperium: Kunyorwa hakufanirwe kuita pasina iyo 4X pfungwa yemutambo wepasi zvachose - iyo spin-off inofanirwa kuishandisa zvishoma.
Hapana humwe humbowo hwakaburitswa murukova rwe anniversary. Saka hazvinyatso kujeka kuti mutambo wemadhayi unofanirwa kushanda sei. Mamwe mazano akange aitwa paFantasy Flight Games: Vatambi vachaongorora nyeredzi uye vanofanirwa kutora kutonga kwemapuraneti kuti vaakudziridze uye vagadzire kutenderera kwehupfumi ikoko. Tambai muchifara padivi nepadivi? Izvo zvakare zvinongoitika kune imwe nhanho shoma neTwilight Imperium: Kunyorwa. Mabasa ehondo akatoziviswa - template iri kuteedzerwa zvakanyanya.
Twilight Imperium inoonekwa seyechinyakare, nyanzvi uye nyanzvi mutambo une hunyanzvi zvinoda. Iyo 4X board game, yakadhindwa munyika ino neAsmodee Germany, yakadzokororwa neyechina edition kwete kare kare. Muchiitiko ichi, Twilight Imperium inoonekwa seimwe yeakanakisa bhodhi mitambo yakambove, mune sub-genre yemitambo yehurongwa huremu hwezita maererano nehunhu hwayo hwakakwira zvakanyanya. Mutambo wakanyorwa naDane Beltrami, Corey Konieczka uye Christian T. Petersen. Mumutambo wetactical board, vatambi vanotora kutonga kwevanhu uye vanonangisa hupfumi hwavo - pakupedzisira vaine chinangwa chakasimba: chinangwa ndechekuunganidza gumi mapoinzi ekukunda. Iyo inotarisisa yeTwilight Imperium, zvisinei, ndiyo nzira iripo, iyo yakazara nezvisarudzo zvisingaverengeki, mazhinji acho ane mhedzisiro inosvika kure.
Nekudaro, hapana zuva rekuburitswa reTwilight Imperium: Kunyorwa parizvino. Vafudzi vanofanira kuva nemoyo murefu. Fantasy Flight Games inoda kuburitsa rumwe ruzivo "nenguva pfupi", uye pamwe zvakare nezve yaimbove isingazivikanwe mutengo renji yemutambo uye kunyora mutambo.
Kare Nhau dzemutambo webhodhi: Nemitambo yemashanga kumapuraneti asingazivikanwe
Inotevera Ravensburger: Nyowani app yeiyo yekare bhodhi mutambo wekirasi
Bhodhi Game Ongororo yePuerto Rico (2020): Yakakodzera Remake yeMutambo Wekutengesa
Mutambo wegore 2021: MicroMacro - Mhosva Guta rinohwina pawn
Kosmos Verlag: Kutariswa kwechigadzirwa uye mapoka matsva anotariswa anotyaira kutengesa
Stellaris: Infinite Legacy - 4X bhodhi mutambo unouya munguva pfupi paKickstarter